ပြည်သူ့အသံနဲ့ ပြည်သူ့ညီလာခံ | MoeMaKa Burmese News & Media
အောက်တိုဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂
• လက်ပန်းတောင်းတောင် ပြည်သူ့ညီလာခံမှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ယ္ခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကအမျိုးသားရေးပြဿနာကြီးများဖြစ်သည့် လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်း ရေးကိစ္စ၊ ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရေးကိစ္စ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အရေးနှင့် တရားမဝင်နေထိုင်သော ဘင်္ဂါလီကိစ္စ၊ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိစ္စနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တဝန်းလုံးတွင် ပြည်သူများရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြဿနာပေါင်းစုံကို ဆွေးနွေးရန် လက်ပန်း တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းဒေသဖြစ်သည့် ဆည်တည်းကျေးရွာတွင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၈) ရက်နှင့် (၁၉) ရက်နေ့များ တွင် လက်ပန်းတောင်းတောင် ပြည်သူ့ညီလာခံကြီးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ညီလာခံကြီးသို့ မြန်မာနိုင်ငံ တနံတလျားမှ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စား လှယ်များ၊ တောင်သူလယ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူထုလူတန်းစား အလွှာအသီးသီးကို ကိုယ်စားပြုသော ကိုယ်စားလှယ်များတို့သည် အခက်အခဲမျိုးစုံကြားမှ တခဲနက်တက်ရောက်လာပြီး ပြည်သူတို့တွေ့ကြုံ ခံစားနေရသည့်ပြဿနာများကို ဒီမိုကရေစီနည်းကျ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာဖြင့် အရှိကိုအရှိအတိုင်း ဆွေးနွေးကာ ညီလာခံကြီးမှ ပြည်သူတို့ အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက် (၂၆) ချက် ချမှတ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မတက်ရောက်နိုင်သည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ သဝဏ်လွှာများ၊ စာတမ်းများ၊ ကဗျာများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ လက်ရှိရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည့် အခြေခံကျသောပြဿနာများကို ထင်ဟပ်သော ကြွေးကြော်သံကြီး (၁၁) ရပ်ကို ကြွေးကြော်ရင်း အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၁။ နှစ်ပေါင်း (၅ဝ) ကျော်အတွင်း ပြည်သူများကိုယ်တိုင် မိမိတို့ဘဝအတွက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးခွင့်ရသော ပထမဦး ဆုံးညီလာခံကြီးဖြစ်သည်။
၂။ ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကျားကုတ်ကျားခဲကြိုးစားခဲ့ကြသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဆားလင်းကြီးဒေသ ကျေးရွာ (၂၆) ရွာနှင့် ဆည်တည်းကျေးရွာပြည်သူများကိုလည်းကောင်း၊
၃။ ညီလာခံကြီးသို့တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော အလွှာအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သဝဏ်လွှာများ၊ စာတမ်းများ၊ ကဗျာများ ပေး ပို့ခဲ့သော ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် အားပေးဂုဏ်ပြုသော ပြည်သူများ၊ သတင်းမီဒီယာများကို၎င်း အလေးအနက်ဂုဏ် ပြုပါကြောင်း မော်ကွန်းတင်အပ်ပါသည်။
• လက်ပန်းတောင်းတောင် ပြည်သူ့ညီလာခံကြီးမှ ဆုံးဖြတ်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁။ လက်ပန်းတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၂။ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏စကားအတိုင်း ၁၈၂၄ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်နေထိုင်လာခဲ့သော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအား မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝပေးရန်နှင့် ယ္ခုလက်ရှိကာလတွင် တရားမဝင်ခိုးဝင်လာ သောဘင်္ဂါလီများအား ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကဲ့သို့သော တတိယနိုင်ငံ တနိုင်-နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၃။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ရပ်စဲရေးကိုချက်ခြင်းလုပ်ပြီး တန်းတူညီမျှသော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြင့် အဖြေရှာရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
၄။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၅။ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် စစ်အင်အားမတိုးချဲ့ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၆။ နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရဖြေရှင်းရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၇။ လယ်ယာမြေများ မတရားသိမ်းပိုက်နေမှုများ ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၈။ လယ်သမားများ၏ဘဝကို အာမခံသည့်လယ်ယာမြေဥပဒေနှင့် မြေလွတ် မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ ဥပဒေပေါ်ထွက်လာစေရန် ဆုံးဖြတ် သည်။
၉။ ဒေသခံတောင်သူများ၏ အကျိုးကိုအာမခံသည့် မျှတသည့်အင်းလုပ်ငန်းဥပဒေများ ပေါ်ထွက်လာစေရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀။ လွတ်လပ်သော တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၁။ အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်သည့်အလုပ်သမားဥပဒေများပေါ်ထွက်လာရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၂။ လွတ်လပ်သောအလုပ်သမား သမဂ္ဂများပေါ်ထွက်လာရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၃။ အလုပ်သမားထုအပေါ်မတရားဖိနှိပ်ဂုတ်သွေးစုပ်နေမှုများ အားရပ်တန့်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၄။ အလုပ်သမားများ၏ စားဝတ်နေရေးကို လုံလောက်သည့်အနိမ့်ဆုံး အခြေခံလစာကို အမြန်ဆုံးသတ်မှတ်ပြဌာန်းရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၅။ အစိုးရတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုမှ ကင်းလွတ်ပြီး သီးခြားလွတ်လပ်သည့် တက္ကသိုလ်များပေါ်ထွက်လာစေမည့် ကျောင်းသားထု အကျိုးစီးပွား ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်သော ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ခွင့်ရရှိစေမည့် ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်အခွင့်အရေးကို လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်မည့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်ဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုရရှိစေနိုင်မည့် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ တက္ကသိုလ်များ အက်ဥပဒေတရပ် အမြန် ဆုံးပေါ်ထွက်လာစေရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၆။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံ တရားဝင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၇။ မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြည်သူလူထုရင်ဆိုင်နေရသည့် ပြဿနာများကို လွှတ်တော်များနှင့် အစိုးရတို့မှ တရားမျှ တစွာနှင့် ထိရောက်စွာ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၈။ လက်ပတောင်းတောင်စီမံကိန်းကို လွတ်လပ်သော ပြည်သူ့ကော်မရှင်တရပ်ဖွဲ့စည်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၉။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၂၀။ (၁၉၅ဝ) အရေးပေါ်စီမံချက် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅ (ည) ကို ဖျက်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၂၁။ ဆန္ဒပြခွင့်ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများပြင်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၂၂။ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဥပဒေတရပ်ပေါ်ထွက်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၂၃။ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ချိုးဖောက်သည့်ကြေငြာချက်များ ထုတ်ပြန်နေခြင်းများကို တရုတ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများက ချက် ချင်းရပ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၂၄။ အမျိုးသ္မီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးရရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၂၅။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
၂၆။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံး လက်ခံနိုင်သည့် ဒုတိယအကြိမ်ပင်လုံညီလာခံကြီး အမြန်ဆုံးခေါ်ယူကျင်းပရန် ဆုံးဖြတ်သည်။
• လက်ပန်းတောင်းတောင်ပြည်သူ့ညီလာခံကြီးမှ ထွက်ပေါ်လာသော ကြွေးကြော်သံများ
၁။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး …. …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၂။ လက်ပန်းတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝရပ်ဆိုင်းရေး. … …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၃။ ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး …. …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၄။ လက်ဝါးကြီးအုပ် မြေယာသိမ်းပိုက်မှုများ ရပ်ဆိုင်းရေး …. …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၅။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး …. …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၆။ မတရားမှုမှန်သမျှ တွန်းလှန်ရေး …. …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၇။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အအုံ တရားဝင်ပေါ်ပေါက်ရေး …. …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၈။ အလုပ်သမားမသမဂ္ဂနှင့် လယ်သမားသမဂ္ဂများပေါ်ပေါက်ရေး …. …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၉။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ခြွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ရေး …. …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၁ဝ။ အမျိုသ္မီးများ – အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူညီတူအခွင့်အရေး ရရှိရေး …. …. … (ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး)
၁၁။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံး တန်းတူညီတူပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံကြီးကျင်းပရေး …. …. … (ဒို့အ ရေး ၊ ဒို့အရေး ၊ ဒို့အရေး)
အရေးတော်ပုံ …. …. … (အောင်ရမည်၊ အောင်ရမည်၊ အောင်ရမည်)လက်ပန်းတောင်းတောင်ပြည်သူ့ညီလာခံ။
၂ဝ၁၂ ခု၊ အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်
၁၃၇၄ ခု၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၄) ရက်။
Tags: ကချင်, ဘင်္ဂါလီ, ရခိုင်, ပြည်တွင်းစစ်
မောင်မောင်စိုး – ရခိုင်ပြည်နယ်မှ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲများ – (ဒုတိယပိုင်း၊ ဇာတ်သိမ်း) (0)